Sucuudiga iyo Imaaraadka oo cambaareeyey qarixii shalay ka dhacay Muqdisho – Walaal24 Newss
March 23, 2018	Off	By walaal24
Dowladaha Sucuudiga iyo Imaaraadka carabta oo soo saaray bayaano kaladwuan oo ay kaga hadlayeen qarixii shalay ka dhacaywadada Maka Almukaramah ayaa si kulul u cambaareeyey falkaasi oo ay ku tilmameen in uu yahay fal arxan dari ah.
War qoraal ah oo ay soo saartay Wasaaradd arrimaha dibadda ee Dalka Sucuudi Carabiya ayaa lagu sheegay in Xukuumadda Riyadh ay siweyn uga xuntahay falkaasi qaraxa oo khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka soo gaaray dad rayid ah.
Boqortooyada Sucuudiga ayaa sheegtay in ay xoojinayso taageerada Dowladda Soomaaliya, islamarkaana ay dowr ka qaadanayso sidii loola dagaalami lahaa maleeshiyada Alshabaab.
Sidoo kale Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa dhankeeda dhaleeceysay qaraxaasi,War saxaafadeed kasoo baxa Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Imaaraadka Carabta,iyagoo dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmayba ilaahay uga baryay naxriistiisa.
Warkan qoraalka ah oo ay soo saartay Dowlada Imaaraadka Carabta ayaa ku sheegtay falkani oo muujinayo sida maleeshiyada Alshabaab ay u yihiin cadowga Shacabka Soomaaliyeed,loona baahanyahay in la xoojiyo gulufka ka dhanka ah Alshabaab.
Sawiro: Duqa Muqdisho oo kala hadlay Guddoomiyeyaasha Degmooyinka horumarinta amniga Caasimada